Tsy matahotra mpanohitra saozanina ny governemanta farary ao Japan · Global Voices teny Malagasy
Nahitana ny Fitsapan-kevitra fa manohana governemanta ny 33 isanjato ; 6,4 ny fanoherana
Voadika ny 25 Septambra 2021 4:37 GMT
Soratra amin'ny afisy: “mibaboka i Suga!!!” Suga Yoshide, izay, amin'ny maha-sekreteran'ny kabinetra azy, nanambara ny vanim-potoana Reiwa vaovao tamin'ny 1 Avril 2019, no nilaza fa hiala amin'ny maha-praiminisitra azy tamin'ny 2 Septambra 2021. Sary namboarin’i Nevin Thompson.
Taorian'ny fotoa-mafana nanjakan'ny Lalao Olaimpikan'i Tokyo “tsy mahazatra” izay natrehan'ny mpijery virtoaly nandritra ny fotoana nampirongatra ny valan'aretina, tamin'ny aogositra farany teo—ary efa mihaodihaody koa ny fifidianam-pirenena—hitan'ny praiminisitra japoney Suga Yoshihide sy ny antoko mitondra miaraka aminy avy ao amin'ny Antoko Demaokratika Liberaly (LDP) fa miha-malazo ny lazany. Eo ihany koa ny andian'ireo tanjona tratrarin'ny antoko mpanohitra mampidika fa kely ihany ny herijika mety isian'ny fiovana ao amin'ny governemanta.
Nirodana ny fankatoavana taorian'ny Olaimpika—tamin'ny 8 aogositra, 29 isanjato monja amin'ny japoney mpifidy no nankatoa ny governemanta, mitaha amin'ny 52 isanjato tsy mankatoa. Tsy ampy herintaona akory dia nilavo lefona tanteraka i Suga amin'ny maha-praiminisitra azy. Tamin'ny 2 Septambra, rehefa nandalo herinandro maromaro nisalasalana, nanambara i Suga fa tsy handray anjara amin'ny latsabato fitarihana ny LDP nokinasa hotanterahana amin'ny faran'ity volana ity, manome lalana ho an'izay praiminisitra vaovao hitarika ny antoko amin'ny fifidianana, izay efa napetraka hotanterahana amin'ny faran'ny volana oktobra.
Lasa praiminisitra i Suga tamin'ny 16 septambra 2020. Mpandimby—sy ambany elatry ny—Praiminisitra Abe Shinzo, tsy tian'ny mpifidy i Suga noho ny antony maro, ary izy rehetra ireo dia mifandraika amin'ny nataon'ny governemantany hiatrehana ny valan'aretina. Hita ho tsy matotra sy manao fandehan-tsokatra ny fanaovam-bakisiny tao Japan. Tsapa tokoa ny tahotra hampirongatra ny tranga COVID-19 nandritra sy taorian'ny lalao Olaimpika, satria niantsambotra nanerana an'i Japan ny fifindran'aretina sy ny fampidirana hopitaly, nefa tsy hita mihitsy izay drafitra apetraky ny governemanta manoloana ny toe-draharaha.
Fa na dia ny fandraofan'ny ekipa Japan medaly be indrindra hatramin'izay tamin'ny lalao Olaimpika aza tsy afa-manova ny hevitry ny mpifidy. Fa na dia tsy mahafapo tahaka izany aza ny governemanta ankehitriny, dia tsy tian'ny mpifidy ihany koa ireo ao amin'ny antoko mpanohitra.
Nandritra ny fitsapan-kevitra nataon'ny NHK (vondrom-pampielezam-peo sy sary ao Japan), manodidina ny 33 isanjaton'ny mpifidy no nanohana ny LDP mitondra ami'izao fotoana. Mifangarika amin'izany kosa, 6,4 isanjato monja tamin'ny namaly fitsapan-kevitra no nilaza fa manohana ny Antoko Demaokratika ara-Dalampanorenana (CDP), antoko lehibe indrindra ao aminy fanoherana maningana ao amin'ny Diet Nasionaly.
Ny tsi-fitokisam-bahoaka ireo antoko tahaka ny CDP dia mety azo ampifandraisina amin'ny fanamarihana hafahafa sy anti-siansa nataon'ireo olo-malaza ao amin'ny fanoherana. Tamin'ny May 2020, ohatra, nandritra ny adihevitra nifanaovan'ireo fanta-daza ao amin'ny fanoherana momba ny andinihana indray ny lalànan'ny heloka bevava ara-pananahana, nanamarika ny mpikambana ao amin'ny CDP Honda Hiranao fa heveriny “ho hafahafa raha samborina izy noho ny nanaovany firaisana ara-nofo amin'ny zazavavy 14 taona nanaiky tsy an-katerena.” Ny Lalàna famaizana (heloka bevava) Japoney amin'izao fotoana manko mametra ny ambany indrindra ho 13 taona.
Niala tsiny i Honda ary niala tamin'ny antoko, ary nanambara fa tsy handray anjara amin'ny fifidianana hoavy, saingy efa vita ny fanapotehana. Nanao izay hamehezana ny fahapotehana ny Antoko Komonista Japoney (JCP), antoko tiam-bahoaka amin'ny faritra ary efa niteny fa hisokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny CDP handresena ny antoko mitondra amin'izao fotoana. Nisioka i Koike Akira, mpitarika ambony ao amin'ny JCP:
Efa nandrisika ny Firenena Mikambana mba hampiakarana ny taona farany ambany isian'ny fankatoavana firaisam-batana voalazan'ny lalàna famaizana amin'izao fotoana. Tokony hohenointsika ihany koa ireo lasibatry ny herisetram-pananahana. Amin'ny tranga rehetra, ny taona leferina ho fankatoavana dia tokony hakarina “hihoatra ny faha-16 taona,” aorian'ny fahafenoan'ny fotoana tsy maintsy ianarana. Nanafintohina ny fanamarihan'[i Honda], ary tokony hohelohina mafy.
Nanjakan'ny fiaraha-mientana LDP-Komeito ny tontolo politika ao Japan hatramin'ny nandreseny ny Democratic Party of Japan (DPJ) tamin'ny fifidianana ankapobeny 2012. Nivakivaky ny DPJ taorian'ny fifidianana, lasa antoko mpanohitra madinika maro any amin'ny fanaovana latsa-bato, ka mahatonga ny LDP-Komeito mbola mitantana ny governemanta.
Mandritra izany fotoana izany, ny Antoko Demaokratika ara-Dalampanorenana (CDP), mpandova ny DPJ ary miandry kendry tohina amin'ny fahalemen'ny LDP, mitolona mafy hifidy ireo gafy. Taorian'ny fanesorana an'i Honda tamin'ilay resaka fankatoavam-piraisana, notohinina tamin'ny fanentanana fandisoam-baovao amin'ny valan'aretina sy ny krizim-pahasalamam-bahoaka ny mpanao lalàna iray hafa ao amin'ny CDP.
Araka ny notaterin'ny Yahoo! Japan News, Buzzfeed, ary ireo loharanom-baovao hafa tamin'ny volana jolay, nampiasa ny fitaovam-panentanan'ny CDP ofisialy i Kitajo Tomohiko, kandidàn'ny CDP amin'ny fifidianana, hizara fandisoam-baovao momba ny vakisiny tao amin'ny Twitter. Nilaza i Kitajo fa “mety hiteraka fahamombàna eo amin'ny vehivavy ny vakisiny mRNA” ary “tsy misy fiantraikany iadiana amin'ny viriosin'ny COVID-19 ny vakisiny Pfizer.”
Taorian'ny fanoherana anjotra nataon'ny dokotera malaza amin'ny tsy fahamarinan'ny filazana,namafa ny siokany i Kitajo ary nialatsiny tamin'ny nanafangaroany ny heviny manokana ho hevitra ijoroan'ny antokony. Na izany aza anefa dia mbola nanohy tamin'ny fanehoany ny fijeriny mampiady hevitra momba ny vakisiny COVID-19 izy, miaraka amin'ireo anti-vaxxers hafa ao amin'ny fanoherana—ahitana an'i Aoyama Masayuki, mpikambana teo aloha tao amin'ny CDP fa lasa indray ao amin'ny Japan Restoration Party (JRP), vondrona iray mahaleotena. Aoyama Masayuki, izay efa nipetraka ao amin'ny Komity parlemantera misahana ny Fahasalamana, Fanasoavana ary ny Asa, matetika misioka fandisoam-baovao anti-vakisiny sady mifandìtra amin'ny dokotera.
Noho izay toe-javatra izay raha mbola mitoetra ao amin'ny laharan'ny praiminisitra “revolving-door” [mandalo dia miserana] ao Japan i Suga. Dia heverina mbola hanohy ny lalany tsy misy ahiahy ny governemanta LDP-Komeito, na dia eo aza ny tsy fitiavan'ny mpifidy.